Ch 14 Matthew – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaMateu / Ch 14 Matthew
14:1 In iyoyo, Herodhi akanzwa nhau nezvaJesu.
14:2 Akati kuvaranda vake: "Uyu ndiJohani Mubhabhatidzi. Amuka kubva kuvakafa, uye ndokusaka zviratidzo vari kubasa maari. "
14:3 Nekuti Herodhe wakange mokumusunga John, akamusunga, akamuisa mutorongo, nokuda kwaHerodhiasi, mudzimai womunun'una wake.
14:4 Nekuti Johwani wakange achimuudza, "Hazvibvumirwi nomutemo kuti imi muve naye."
14:5 Uye kunyange aida kumuuraya, aitya vanhu, nokuti vaimuona somuprofita.
14:6 ndokubva, musi zuva rokuberekwa kwaHerodhi, mukunda waHerodhiasi akatamba pakati pavo, uye zvakafadza Herodhe.
14:7 Uye saka wakavimbisa nemhiko kuti uchamupa chipi nechipi chaaizokumbira naye.
14:8 asi, wavakanga zano naamai vake, akati, "Ndipei pano, mundiro, musoro waJohwani Mubhabhatidzi. "
14:9 Mambo akarwadziwa kwazvo. Asi nokuda kwemhiko yake, uye nokuda kwevaya vagere pakudya naye, akarayira kuti apiwe.
14:10 Akatuma vanhu akagura Johwani musoro mutirongo.
14:11 Uye musoro wake wakauyiwa nawo uri mundiro, uye ukapiwa kumusikana, uye iye akauendesa kuna amai vake.
14:12 Uye vadzidzi vake vakaswedera uye vakatora mutumbi, ivo vakauviga. uye kusvika, vakashuma kuna Jesu.
14:13 Jesu wakati achizvinzwa, akabva nechikepe kubva ipapo, kunzvimbo yerenje ari oga. Zvino zvaunga akanga anzwa izvozvo, vakamutevera netsoka vachibva mumaguta.
14:14 Nokubuda, akaona chaunga chikuru, uye akatora nyasha pamusoro pavo, uye akarapa vairwara vavo.
14:15 Uye ava manheru, vadzidzi vake vakaswedera kwaari, vachiti: "Iyi inzvimbo yerenje, uye nguva yatopera. Endesai mapoka acho evanhu, kuti, nokuenda kumisha, kunotenga zvokudya pachavo. "
14:16 Asi Jesu akati kwavari: "Havafaniri kuenda. Vapei imwi kuti vadye pachenyu. "
14:17 Vakamupindura, "Hatina chinhu pano, kunze kwezvingwa zvishanu nehove mbiri. "
14:18 Akati kwavari, "Uyai nazvo pano. Kwandiri"
14:19 Zvino wakati arayira chaunga kuti chigare pasi pauswa, akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri, uye makatarisa kudenga, akavonga, akamedura ndokupa zvingwa kuvadzidzi, zvino vadzidzi vakapa kuzvaunga.
14:20 Zvino vakadya vose, vakaguta. Vakanonga vakasara: matengu gumi nemaviri azere nezvimedu.
14:21 Zvino uwandu vaya vakadya vaiva varume zviuru zvishanu, tisingabatanidzi vakadzi nevana.
14:22 Zvino Jesu akabva akamanikidza vadzidzi vake kuti vakwire chikepe, uye kuti asati naye kuyambuka gungwa, iye achirega chaunga.
14:23 Zvino wakati aregera zvaunga, akakwira oga mugomo kundonyengetera. Zvino manheru, wakange ari oga ipapo.
14:24 Asi mukati megungwa, igwa rakanga ichipeperetswa pamusoro nemafungu. Nokuti mhepo yairwisana navo.
14:25 ndokubva, Nenguva yechina yemurindiro yeusiku, akauya kwavari, achifamba pamusoro pegungwa.
14:26 Uye vamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakanetseka, vachiti: "Rinofanira kunge Idzangaradzimu." Vakadanidzira, nokuti kutya.
14:27 uye pakarepo, Jesu akavaudza, vachiti: "Ivai nokutenda. Ndini. Usatya."
14:28 Ipapo Petro akapindura akati, "Ishe, kana iwe, rayirai ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. "
14:29 Akati, "Uya." Ipapo Petro, achiburuka kubva muchikepe, akafamba pamusoro pemvura, kuti vaende kuna Jesu.
14:30 Asi zvechokwadi, kuona kuti mhepo yakanga simba, akatya. Uye sezvo akatanga kunyura, akadanidzira, vachiti: "Ishe, ndibatsirewo."
14:31 Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko rwake uye akamubata. Akati kwaari, "O shoma mukutenda, unokononei?"
14:32 Uye vakati akakwira mugwa, mhepo ikanyarara.
14:33 Zvino vaya vaiva mugwa ikaswedera, akanamata kwaari, vachiti: "Chokwadi, imi muri Mwanakomana waMwari. "
14:34 Uye wakati vayambuka gungwa, vakasvika munyika Genesaret.
14:35 Zvino varume venzvimbo iyo vakanga vamuziva, vakatuma shoko panyika yose iyo yakapoteredza, vakauyisa kwaari vose vakanga vachinetseka.
14:36 Ivo kumuteterera, kuti vabate mupendero wenguvo yake. Uye vose vakabata nayo vakaponeswa.